Ny Simpsons dia mankalaza ny toko faha-600 tonga amin'ny Virtual Reality | Androidsis
Ny Simpsons dia mankalaza ny toko faha-600 tonga amin'ny Virtual Reality
J.Vargas | | About us
Tamin'ny 17 Desambra 1989, ny toko voalohany amin'ity andiany sary mihetsika malaza indrindra eran-tany ity dia nalefa: Ny Simpsons. Efa elaela io fizarana voalohany io saingy mitohy ny andiany, miaraka amin'ireo mpamorona azy ireo manamboatra zava-baovao sy tantara vaovao ho an'i Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie ary ny sisa amin'ny tarehin-tsoratra ao amin'ilay tanànan'i Springfield noforonina.
Ny Simpsons dia efa amin'ny vanim-potoana fahavalo amby roapolo, tsy latsa-danja, ary andro vitsivitsy monja lasa izay dia nandefa toko faha-600. Ary mba hankalazana an'io toko feno boribory io, fantatrao ve izay nataon'ny fianakaviana amerikana malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra? Eny, nofonosin'izy ireo ny lasakany ary nikiakiaka izy ireo Ny Simpsons dia mandeha amin'ny zava-misy virtoaly!
Afaka mankafy The Simpsons ianao izao amin'ny zava-misy virtoaly. Na farafaharatsiny, efa afaka mankafy tantara kely momba ny The Simpsons ianao, mitondra ny lohateny "The Planet of the Couches" ("The planet of the sofas" amin'ny firesahana mazava tsara momba ny The Planet of the Apes), izay hita mazava tsara tao amin'ny toko 600 amin'ny andiany, izay mifanindry ihany koa amin'ny iray amin'ireo fandaharana manokana fanao isan-taona izay alefa alohan'ny Halloween.
Ity no fanomezana ho an'ireo mpankafy mbola eo, aorian'ny fizarana 600, mijery ny andiany. Fisehoana kely amin'ny zava-misy virtoaly izay, raha mahomby, dia azo antoka fa tsy ho ny farany raha jerena fa The Simpsons dia azo ampiasaina betsaka amin'ity tsena vaovao ity.
Ahoana ny fomba hijerena The Simpsons amin'ny VR amin'ny Android?
Mba hahafahanao mahita ity fohy kely amin'ny The Simpsons amin'ny Virtual Reality ity, ny sisa ataonao dia ny mametraka ilay rindranasa amin'ny finday Android-nao. tantaraavy amin'i Google Spotlight.
Tantaran'i Google Spotlight
Raha ny lojika dia heverinay fa ny smartphone-nao dia mifanaraka tanteraka amin'ity rindranasa ity ary mazava ho azy fa manana ianao solomaso virtoaly virtoaly sasany, toa ny Google baoritra na maodely mifanentana. Satria raha tsy misy azy ireo dia tsy ho tanteraka tanteraka ny traikefa satria tsy afaka mankafy 3D ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Simpsons dia mankalaza ny toko faha-600 tonga amin'ny Virtual Reality